SARIPIKA: Miandry Fanampiana Fatratra Ny Sisam-patin’ny Rivodoza Mahery Vaika Ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 23:16 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, 日本語, Español, Aymara, English
Lalana iray ao Balangiga, Samar. Iray amin'ny faritany niharam-pahavoazana indrindra. Sary avy amin'ny Autonomo Sr Abellar Amano, Facebook
Tsy voazara haingana sy tsy voazara tsara amin'ireo vondro-piarahamonina sisa niangana tamin'ny tafio-drivotra mahery vaika Haiyan (Yolanda) tao Filipina ny fanampiana. Maro ireo sisa niangana no nitaraina fa tsy nipaka tany amin-dry zareo ny fanampiana nampanantenain'ny governemanta.
Nandona ny vondro-nosy Visayas i Haiyan tamin'ny zoma (heriny) izay nanetsika tafiotra izay nahafaty olona mihoatra ny 1500. Saingy mety ho mbola betsaka kokoa noho izany ny fahavoazana raha mbola tsy fantatra ny toe-draharaha any amin'ny tanandehiben'ny faritra lavitra amoron-dranomasina. Noho ny fahasimban'ny lalana dia tsy tafapaka any amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ny fikambanana mpamonjy voina sy mpanome fanampiana.
Noho ny fidaviavan-tsakafo fatratra dia lasa mandroba tsenambarotra lehibe sy toeram-pitehirizam-bary ny sisa niangan'ny tafiotra mahery. Nandrenesana tatitra fandrobana ny tao an-tanànan'i Tacloban sy ny tanàna hafa any amin'ny faritanin'i Leyte. Ho setriny, nampanantena ny handefa fitaovam-panampiana hozaraina any ny governemanta ary naniraka vondro-kerin'ny polisy hameripiarahamonina ravan'ny tafio-drivotra mahery. Mandritra izany fotoana izany, mikorapaka mividy entana ny any Samar:
Fitaintainana no nameno ny tanànan'i Samar antsoina hoe Calbayog noho ny fahavitsian'ny fitaovana ilaina; ahitana fikoropahana mividy zavatra eny amin'ny mpivarotra maro
Rehefa mangalatra fahitalavitra sy fitaovana fanasan-damba dia fandrobàna izay
Tena malahelo tokoa mandre fa tonga hatramin'ny fandrobana fivarotana sy milina mpamoaka vola ireo sisa niharam-boina
Manipy entana avy ao amin'ny fitehirizana ny mpandroba ao Guiuan, E.Samar taorian'ny fiadiana mafy nataon'ireo mpikatroky ny famonjena voina hanome fanampiana ireo sisa velona
Tamin'ny alalan'ny pejy Facebook-n'i Randy Felix Malayao, ny sisa niangana iray no niangavy ny vahoaka tsy hanenjika loatra ireo mbola velona amin'ny fitsarana (fanamelohana) ireo mpandroba:
Aza maika loatra ny hitsara ireo mpandroba, nandroba aho. Nandroba fanafody avy ao amin'ny vokovoko mena, ronono sy sakafo ho an'ny ankizy. Nandeha ora efatra sy nihady tavoahangy plastika roa mba sitrany ahay hahazo zavatra azo sotroina sy hitondra miverina ny sasany. Ireo olona nandray efijerin'ny (ecran) fahitalavitra fisaka dia ireo olona nanome ahy hosotroina sy lugaw (ranombary). Ireo olona tahaka ny efa voafonja taloha ireo no nanome zavatra hohanina ho ahy. Saika tamin'ny fotoana rehetra no nanolo-tanana ho anao izy ireo rehefa milaza fa tena mila zavatra tokoa. Ny tsy nasehon'ny vaovao dia ny fomba fifanampian'ny olona nandritra ny voina.
Aza miantso azy ireny ho mpandroba, hoy ny nosoratan'i Martha Villarosa:
Mpandroba?! tsy misy manan-jò hilaza azy ireo ho tahaka izany. Mba eritrereto fotsiny hoe maro amin'izy ireo no vao rava trano, nandao azy ireo ny maro tamin'ny notiaviny, tsy nanan-kohanina na hosotroina. Mba misaora fa velona izahay, salama ary mbola mankafy ny fiainanay. Andao hijery ny lafy tsarany amin'izany. Ny ilain'ny mpiray tanindrazana amintsika dia fanohanana sy vavaka mba hamakivakian-dry zareo izao (voina izao)
Potiky ny tafiodrivotra Haiyan ny lalana maro. Saripika avy amin'ny Autonomo Sr Abellar Amano, Facebook
Ny manampahefana ambony indrindra ao amin'ny firenena eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny Frera Armin Luistro, no namoaka izao hafatra izao ho an'ny mpanabe:
Jereo aloha ny olona. Aza matahotra momba ny fahasimban'ny fananana -hiresaka momba izany isika aoriana. Ny zava-dratsy indrindra dia ny fanisana trano sy hazo mianjera nefa tsy miraika amin'ny vahoakantsika.
Faharoa, andao haverintsika ho an'ny an-tsekoly ny zanatsika. Ny fomba tsara indrindra ho an'ny ankizy ho sitrana dia ny famerenana araka izay haingana ny fahazarany – ary izany dia ny famerenana azy ireo ho any an-tsekoly. Tsy ilaina ny tena manao fianarana. Avelao ry zareo hilalao. Manaova lahasa maro.
Atom Araullo nitatitra fa niverina tamin'ny ampahany ny fifandraisan-davitra tao Tacloban:
Tsy naninona (aho) teto Tacloban! miarina tsikelikely ny tolotra Telco. Heniky ny faharavana tanteraka. Mila ny fanampiana rehetra azony raisina ny olona eto
Mihamaro ireo Filipiana no mandray anjara amin'ny lahasam-pamonjena:
mampafana ny fo ny mahita olona maro mandeha lavitra kokoa hanao asam-pamonjena voina. fotoana ankasitrahako ny tambajotram-piarahamonina
Ny Palo, Fonenan'ny mpianatra ao Leyte ao amin'ny oniversiten'i Filipina potiky ny tafiotra. Saripika avy amin'i Cleve Kevin Robert Arguelles, Facebook
Guiuan, Samar Atsinanana. Sekolim-panjakana sy tobim-pitsaboana (vonjimaika). Izao sisa no tavela ankehitriny.
Fijery talaky maso ny fahasimbana vitan'i Yolanda tao an-tanànan'i Basey ao Samar
Frank Cimatu mampahatsiahy sy mampitandrina antsika ny dikan'ny fanekena mangina tsy satry:
Fantatrareo ve ny tena dikan'ny fanekena mangina tsy satry? iray na roa volana avy eto rehefa lasa avokoa ny rehetra, tsy misy sakafo maimaipoana intsony, miverina miady amin'ny fiainana indray ny olona ary ho toy ny tifitra variraraka ho azy ireo ny fahatsapana izay nitranga sy izay mbola eny am-pivarotana. Ary dia ho fantatry ry zareo izany tena dikan'ny hoe manaiky mangina tsy satry.